အရမ်းမိုက်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အထင်းသားပေါ်လွင်နေတဲ့ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ရတနာဗိုလ်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ – Shwe Ba
အရမ်းမိုက်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အထင်းသားပေါ်လွင်နေတဲ့ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ရတနာဗိုလ်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ
အနု ပညာ လောက မှာ ပရိသတ် အခိုင် အမာနဲ့ အောင်မြင် မှု တွေ များစွာနဲ့ ရပ်တည်နေ ပြီး ဇာတ်ကားတွေ များစွာ ရိုက်ကူး သရုပ်ဆောင် ထား တဲ့ ပြည်သူချစ် အနုပညာ ရှင် မင်းသမီးချော လေး ကတော့ ရတနာဗိုလ်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် နော်..။သရုပ်ဆောင်ကောင်း တဲ့ အပြင် ချစ်စရာကောင်း ပြီး ကျော့ရှင်း တဲ့ အလှတရား တွေ နဲ့ ဆွဲဆောင် မှု ရှိ တဲ့ ဟန်ပန်လေး တွေ ကလည်း မြင်သူ ပရိသတ် တွေ ကို အချစ်ပို စေ တာဖြစ်ပြီး ယောကျ်ားလေး မိန်းကလေး မရွေး အားလုံး က ချစ်ခင် နေကြ တာပါ … .
ပရိသတ် အချစ် တော် လေး သူမက တော့ အနုပညာလှုပ်ရှား မှု လေးတွေကို အမြဲမျှဝေ လေ့ ရှိပြီး အပြင်လက် တွေ့ ပုံရိပ်လေးတွေ နဲ့ လည်း အလွမ်းပြေ စေ ကာ အခု တစ်ခါမှာ လည်း ရေကူး အပန်းဖြေ နေတဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ် လေးတွေ ကို ဝေမျှလာပါ တယ် နော်..။ဖြူဖွေး ဝင်းဥနေ တဲ့ရင်ခုန် စရာ အတွင်းသား အလှတွေ ပေါ် လွင် နေတဲ့ ရေကူး ဝတ်စုံလေး ကိုဝတ်ဆင်ကာ ထိရက် စရာ မရှိအောင် ညို့အားပြင်းပြင်း မိမိုက်လွန်း နေ တဲ့ ရတနာဗိုလ်ရဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေ ကတော့ ပရိ သတ်တွေ ရဲ့ အမြင်အာရုံ တွေ ကို ဖမ်းစားထား ပါ တယ် နော်..။
“ နှစ်သစ် မှာ အချစ်တွေမလျော့ ပါ နဲ့ ပိုချစ်ပေးပါ နော်……..🧡..” ဆိုပြီး ရေကူး အပန်းဖြေနေတဲ့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေကို ရတနာဗိုလ် က ပရိသတ် တွေကို နှစ် သစ် အစလေး မှာ အလွမ်းပြေလေး ဝေမျှ လိုက်တာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် နော်..။ညို့အားပြင်း တဲ့ အလှတွေ ပေါ်လွင်နေ ပြီး အမိုက်စားလေး ဖမ်းစားထား တဲ့ မင်းသမီး ချောလေး သူမ ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို လည်း ပရိသတ်တွေသဘော ကျ နေကြမီာမို့ အားလုံး အတွက် တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါ တယ် နော်…။
အႏု ပညာ ေလာက မွာ ပရိသတ္ အခိုင္ အမာနဲ႔ ေအာင္ျမင္ မႈ ေတြ မ်ားစြာနဲ႔ ရပ္တည္ေန ၿပီး ဇာတ္ကားေတြ မ်ားစြာ ရိုက္ကူး သ႐ုပ္ေဆာင္ ထား တဲ့ ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာ ရွင္ မင္းသမီးေခ်ာ ေလး ကေတာ့ ရတနာဗိုလ္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္..။သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္း တဲ့ အျပင္ ခ်စ္စရာေကာင္း ၿပီး ေက်ာ့ရွင္း တဲ့ အလွတရား ေတြ နဲ႔ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိ တဲ့ ဟန္ပန္ေလး ေတြ ကလည္း ျမင္သူ ပရိသတ္ ေတြ ကို အခ်စ္ပို ေစ တာျဖစ္ၿပီး ေယာက်္ားေလး မိန္းကေလး မေရြး အားလုံး က ခ်စ္ခင္ ေနၾက တာပါ … .
ပရိသတ္ အခ်စ္ ေတာ္ ေလး သူမက ေတာ့ အႏုပညာလႈပ္ရွား မႈ ေလးေတြကို အျမဲမၽွေဝ ေလ့ ရွိၿပီး အျပင္လက္ ေတြ႕ ပုံရိပ္ေလးေတြ နဲ႔ လည္း အလြမ္းေၿပ ေစ ကာ အခု တစ္ခါမွာ လည္း ေရကူး အပန္းေၿဖ ေနတဲ့ အမိုက္စားပုံရိပ္ ေလးေတြ ကို ေဝမၽွလာပါ တယ္ ေနာ္..။ျဖဴေဖြး ဝင္းဥေန တဲ့ရင္ခုန္ စရာ အတြင္းသား အလွေတြ ေပၚ လြင္ ေနတဲ့ ေရကူး ဝတ္စုံေလး ကိုဝတ္ဆင္ကာ ထိရက္ စရာ မရွိေအာင္ ညိဳ႕အားျပင္းျပင္း မိမိုက္လြန္း ေန တဲ့ ရတနာဗိုလ္ရဲ့ ပုံရိပ္ ေလးေတြ ကေတာ့ ပရိ သတ္ေတြ ရဲ့ အျမင္အာ႐ုံ ေတြ ကို ဖမ္းစားထား ပါ တယ္ ေနာ္..။
“ ႏွစ္သစ္ မွာ အခ်စ္ေတြမေလ်ာ့ ပါ နဲ႔ ပိုခ်စ္ေပးပါ ေနာ္……….” ဆိုၿပီး ေရကူး အပန္းေျဖေနတဲ့ သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြကို ရတနာဗိုလ္ က ပရိသတ္ ေတြကို ႏွစ္ သစ္ အစေလး မွာ အလြမ္းေျပေလး ေဝမၽွ လိုက္တာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္..။ညိဳ႕အားျပင္း တဲ့ အလွေတြ ေပၚလြင္ေန ၿပီး အမိုက္စားေလး ဖမ္းစားထား တဲ့ မင္းသမီး ေခ်ာေလး သူမ ရဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြ ကို လည္း ပရိသတ္ေတြသေဘာ က် ေနၾကမီာမို႔ အားလုံး အတြက္ တင္ဆက္ေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္…။
Previous post ပုရိသေတွရဲ့ ရင်ခုန်သံကို မြန်သွားစေမယ့် အိန်ဂျယ်ကိုရဲ့ ဆက်ဆီကျတဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်များ
Next post ဖြူနုဝင်းမွတ် နေတဲ့ အတွင်းသားအလှလေးတွေ အထင်းသားမြင်နေရတဲ့ ရေကူးကန်ထဲက Lလစ်ရှားရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး